🚀 Bitcoin Mining maka onye ọ bụla! | Crowd-Mining.io
Bitcoin Mining maka onye ọ bụla!
Ọ bụ ibu mfe - Your Server na-ama melite na-agba ọsọ. Mepụta akaụntụ gị ugbu a. Ma nweta gị na mbụ Bitcoins. Dị nnọọ eji anyị Bitcoin cloud mining service!
Ihe anyị na-eguzo n'ihi na.
Chọpụta ihe na-eme ka Crowd-Mining.io pụrụ iche.
Bitcoin mining e mere na-akụ-kpụ ọkụ n'ọnụ na-esi ike. The ọnụ ọgụgụ nke nkanka chọtara Miners anọgide otu ebe. Mgbe a server choputara a ngọngọ, ọ enọ onwe ya na a òkè nke Bitcoins. Ugbu a òkè 25 Bitcoins.
Anyị na-enye anyị investors ohere itinye ego na anyị azụmahịa. Na dabeere na n'elu kọwara usoro, ị na-enweta kwa ụbọchị uru. Ọzọkwa, investors na-asian na anyị Daily-Mining-Newsletter.
Bitcoin Mining a ngọngọ siri ike n'ihi na SHA-256 hash nke a nkanka nkụnye eji isi ga-ala karịa ma ọ bụ hara ka lekwasịrị. Nsogbu a nwere ike mfe maka nkọwa nzube: The Hash nke a ngọngọ ga-amalite na a ụfọdụ ọnụ ọgụgụ nke efù. The puru nke ịgbakọ a hash nke na-amalite na ọtụtụ efù dị ala.
Dị ka e kwuru n'elu, a otu ngụkọta oge na-erepịakwa a nnukwu mgbakọ na mwepụ mgbalị. Ya mere, ọ dị mkpa na-anọ ruo ụbọchị na sava. Anyị na-eji Kacha ọhụrụ tọhapụrụ Bitcoin ASIC ígwè ọrụ. N'ihi oké mmekọrịta, anyị na-enweta nke kacha mma ahịa na ọhụrụ na sava.
Ekele anyị mmepe otu, anyị nwere ike ji nganga gwa ya na anyị nwere otutu Web-Dashboard wepụtara maka ndị ahịa anyị. Na ya na ha nwere ike inyocha ndị Daily Mining pụta. Na N'ezie na-azụ ihe na-esote nkwekọrịta.
M na-enye m nkwenye, na m email nwere ike ịchekwa.